DAAWO VIDEO:Foosiya Xaaji Aadan Iyo Khadiija Maxamed Diiriye oo Weerar Ku isku Qaaday Barlamaanka Dhexdiisa
April 14, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 15
Xildhibaan Foosiya xaaji Aadan oo horay Usoo noqotay wasiirka Arimaha Debada Iyo Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye Ayaa Su’alo kulul Isweydiiyey Kadib markii Barlamaanka Ka Dooday Arimaha Amniga Dalka Siduu yahay.
Foosiya Xaaji Aadan Ayaa Sheegtay Inay Siyaasada Amniga Dalka kala Qeyb san tahay,waxaana U jawaabtey Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye Wasiirka Ciyaaraha Iyo Sports Ka.
War aniga ma aqaan xildhibaanadaan goboladay kaklasocdaan laakiin waxaan ogahay xildhibaano goboladooda xaqooda u raadinaya inaysab u joogin Puntland iyo Jubbaland War waa laheshiiyay Muqdishowwaa caasimad laakiin waa meeshii shalay lagu xasuuqay dadka goboladaas jooga hadeer hade wax alaala wixii Soomaliya lagu deeqolooguma talagelin Muqdihoweewaxay udhexeysaa Soomaaliya ooidilDeeqbaa la siinayaa soomaaliya waxaa lagu hergelinayaa Muqdishow Mashruuc baa Soomaaliya la iinayaa waxaa laga fulinayaa Muqdishow Su aasha waa ma Banaadir dadka jooga keliyah baa Soomaaliya ah war Xildhibanayahow isaga soo taga oodaawooyinkiina meelo kale ku qaata wax kale umajoogtaanee. Kii Howlgab noqda ooaan soconkarin wiilkiisuu ku bedelayaa ka sooqaad Xasan Abshir
Yaan laga hor imaan Hogaamiyayaasha Jubbaland iyoPuntlannd Soodhaweyn kuma qancayaan waa kuwii shlay kabala’aan uga baxay Muqdiow
Waataas reer Galmudug ayagoo Caydiid iyoCabdiqaydiid ay keeneen ooweli laga war qabo Dagaaladii Cabdi Qaydiid uu galay haatana Muqdishow waxa ka dhigayaan. Sheekaday wadaana waa Hawiyow kaca taasoo ay waxay dhaceen doonayaan inay ku haystaan. Abgaalna ku xukuman deganadooda.
fawsiya Xaaji asal ahaan waa reer hargeeysa,laakiin waa qof mudo dheer reer koonfur ahayd.
Kahdiijo waa reer banaadir asal ah oo xamar ka soo jeeda.Labadaba saan ka maqlo waa labo gabdhood oo fir-fir coon.
Waa Baarlamaa bilaa I’ll ah oonan waxba qaniini Karin. Ilkaha caaga ah (dentures) ee ugu wada jirana waxey soo xidhaan uun maalintey mooshin wax ku goosta isleeyihiin.
Meeshani waxey ku haboon tahay in Caasimada laga raro oo Balcad ama magaalo yar oo kooban oo ay Dawladu ku shaqeyn karto iskuna illaalin karto la geeyo. Waayo Dawladu masuuliyada magaalada weyn ee Muqdisho wey ka hadhi laheyd.
Muqdishona marka maamul loo sameeyo oo dadkeeda loo dhaafo oo nabadeysta la yidhaahdo. Waxaan hubaa in nabadgalyo darada baahdey ee Muqdisho kun jeer sidan dhaami laheyd. Wixii dhaliilo ah ee ah ee amniga kusaabsan waxa gurada loo saari lahaa maamulka iyo dadka meesha degen. Sida Puntland oo kale, dhaliilaha iyo amaanta amniga ku saabsan iyaga ayaa leh.
Dawladuna hadey umada si daacadnimo ah ugu shaqeyneyso ay shaqo badan qabsan Kari laheyd. Hadii kalena fashilkeeda marka la arko dhakhso loo badali lahaa. Waxaan hubaa in karti laawe iyo kheyr laaweba beri hore hawada loo diri lahaa marka la arko fashilkooda oo ay waayaan meel ay isku qariyaan. Imikase Muqdisho ayay iyaguna sida Alshabaab u qeriso oo ay gabood uga dhigtaan ayay iyaguna fashilkooda uqu qariyaan.
@ Jaalle Ahmed,
Qodobka aad ka sanqadhisay ee ku saabsan in ay habboonayd in dadka deegaanka Muqdisho maamul hoosaad loo sameeyo waa mid aan 100% kugu raacsanahay oo waa anigii sanado hortood ku nuuxnuuxsan jiray in Banaadir iyo inta hoos timaadda laga yeelo maamul Goboleed oo Xamar na ay magaalo madaxda u noqoto iyada oo isla markaasina ay federaalka u tahay caasimadda koowaad. Talo seegtay ayay ahayd kuwii isku foogganaa waagii maamullada la dhammeys tirayay.
Laakiin Ahmedoow, midda aad ku qaldan tahay tamaaman waxaa weeyaan hadalkaaga ah in aanay dawladdu (oo aad ka waddo Madaxweyne Farmaajo) daacad u ahayn dadka iyo dalka ba.
Xaqiiqada aan Ahmedoow la daahi karini waxaa weeyaan in aanu abid Villa Muqdisho soo marin madaxweyne Farmaajo Soomaaliya uga daacadsan oo uga hufan dhanka madaxnimada iyo maamul wanaagga. Ayaan daradiisa ayaa noqotay in uu yeey iyo yaxaas wada yoomaya ka dhex yuubban yahay oo ay wuxuushi talada la wadaagto.
Adigu in aad gartiisa siiso waxaa kuu diiddan in aad SNM tahay oo uu isaguna yahay nin Mareexaan ah. Nin aqoonyahan ah baad tahay ee waxaa kugu habboonayd in aad gaalka aad dilayso gartiisa siiso Ahmedoow.
Cismaqnow anigu kartilaawahan uma arko Madaxweyne dhameystiran. Dadkii doortay wey ku hungoobeen. Taasaana dhab ah. Candhuuftaada Cismaanow dib iskaga liq waayo hadaaney weli kaa daadegin taasi ama adiga ayaa quus ah ama iyada dacarta ka qadhaadh ayaad adoo ku margabaya dirqi ku dhunjin (liqi) doontaan.
Wallee gartiisa beri hore ayaan siin lahaa haduu yahay Madaxweyne aqoon iyo raganimo leh.
Intan yar iiga Yara jawaab adoo mahadsan. Xagee lagu arkey Madaxweyne Qam ah oo aanan umada uu masuuliyada u hayo la hadlin oonan wax u sheegin, marka ay xaaladu cakirmato siyaasad ahaan, marka uu heshiisyo masiiri ah soo galo iyo marka tacadi dhaco sida qaraxyada?
Cismaanow Farmaajo aqoon yahan wuu ahaan karaa, aqoontuse ma ahan uun PHD iyo Masters inuu heysto. Carabtu waxey ku maahmaahdaa Libaax 10 laxaad hogaaminaya ayaa ka adkaan kara, 10 Libaax oo ay laxi horboodeyso. Fariid aanan aqoon sare laheyn ayaa badanaaba dhaama doqon PHD sita. Anigu ma lihi Farmaajo waa doqon laakiinse waxaa hubaal ah inuusan u qalmin jagadaas uu isku soo sharaxay. Farmaajo waxa uu kaga haboon yahay jagadan oo uu wax badan oo la taaban karo qaban Kari lahaa isaga oo Wasiir ah oo lagu hagayo siyaasad ay dejiyeen dad ka khibrad iyo fiiro dheeri. Jagada Wadanka ugu sareysaa waa hogaamin. Ma waxa aad is barbar dhigi laheyd Cabdillaahi Yuusuf iyo Farmaajo markey noqoto hogaan ahaan. Waa kaaf iyo kala dheeri. Cabdillaahi Yuusuf inkasta oo uu ahaa dictator mucangag ah oo dhiigyo cab ahaa, hogaanimo markey noqoto Farmaajo wax badan buu dhaamey, PHDiina muu heysan. Gaasbaa Dawladnimada uga khibrad badnaa, xitaa Axmed Madoobe ayaa ka hogaamiyeysan Farmaajo.
Farmaajo hadaladiisa ayaad ka dheehan kartaa inuu billaa Karti yahay. Aftahan maaha inuu ahaado, laakiinse codkarnimo iyo isku kalsooni ayaa looga baahan yahay hogaamiye. Farmaajo marmarka iyo dhifka uu hadlo, weedhiisu ma kafeyso dadka oo salka dhulka uma dhigto.
Labo midh uun aan kaaga soo qaado. Qalbi Dhagax markii la dhiibey, waad ogeyd oo muu hadlin. Hadii Madaxweyne looga baahnaa inuu hadlo markaas mar ay ka munaasibsaneydi mey jirin. Xitaa Qaraxii Soobe taasaa ma munaasibsaneydi waayo cadawgu dibad iyo gude kuu doonaba haka yimaadaa Kun xitaa haduu kaa dilo waxa ka tiiraan kulul oonan la barbar dhigi Karin hal qof ooy Dawladaadu cadawga u dhiibto. Shacabku kuwuu cadawgu ka diley wey u baroordiiqi, weyna u aari karaan, dowladana wey u garaabi karaan, keyse dawladoodii dhiibtey halkey ugu barooran ama ugu aargudi sow wadankoodii muu dhiibin? Waakii Farmaajo dhuuntey markey xaajo ku cadaatay. In mudo ahi markey kasoo wareegtey waa kii la wareystey. Su’aashii laga weydiiyay Qalbi Dhagax dhiibistiisii, jawaabteedii waxa uu ka dhigay qaraarkii Baatlamaanku ka soo saarey arrintaas ayaan ku raacsanahay. Waxey aheyd in weriyuhu ku yidhaahdo Madaxweyne Baarlamaanku waxa uu arintaas ka yidhi golahaas ayaa ka yidhiye adigu shakhsiyan maxaad ka leedahay arintaas shacabkii weli aduu afkaaga dhowrayaaye?
Ta labaadna waa shaley markuu mudaharaadyadii Muqdisho ka dhacayay dadka kala hadlayay ee uu isaga oo cadheysan lahaa maxaa la’iigu mudaharaadayaa. Halkey aheyd inuu shacabka dejiyo oo uu uga garaabo tacadiga ay Dawladiisu ugusii dartay ta Argagixisadu ku heyso ayuu iyagii labada dhanba ku dhagranaa daalac usii raacay. Maxaa ku xigay? Waakaas maanta odayadii Hawiye ka baryaya iney shacabja Reer Muqdisho ka sasabaan si ayaan ugu kicin.
Cismaanow waad ka hordhacdey natiijadii markaad tidhi Soomaaliya soomuu marin Madaxweyne ka daacadsan ama hufan Farmaajo. Waxase dhaba oo biyo kama dhibcaan ah in uu Farmaajo helay fursad aaney helin Madaxweynayaashii ka horeeyay oo dhami. Taasi oo aheyd niyadsami iyo gacmo furan oo lagu soo dhaweeyay. Farxad, reynreyn, yididiilo iyo rajo ayay shacab dareemeen markii la doortey. Meelo badan ayaa looga dabaal degay. Waxa hubaal ah haduu maanta qaban lahaa 25% wuxuu balanqaadey, dadkana la hadli lahaa oo uu ka wergelin lahaa halka ay kolba xaaladu mareyso, goleyaashena la shaqeyn lahaa in uu weli dul saarnaa mawjad taageero ah ooney cidina ku dhacdeen in ay xagtin baad sheegiye dhankiisa il qaloocan lagu eego. Waxeyse mucaaridkiisu ka faa’iideysteen Karti yaridiisa iyo aamusnidiisa markey arkeen. Ishiisa laga arke ayaa ushiisa lala dhacaa. Maanta shacabkii niyad samida u hayay badankoodu ma arki karaan waayo quus ayay ka joogaan. Inta taageeradiisa kusii hadheyna say doonaanba haku taageeraana ma dafiri karaan in uu Farmaajo lumiyay fursad dahabi ah oo dhif iyo naadir ah oo uu helaa Madaxweyne. Marmarsiinyo iyo geed kale oo lagula xoqdo oonan isaga laftirkiisa aheyni ma jiryo.
Ahmed iduur: horta adigu ceeb kuma lihid inaad Farmaajo mucaaraddo oo waa caddifaddii iyo cuqdaddii iduur, Cismaan waa nin caaqil ah , waayo arag ah, khibradna u leh arrimaha Ka socdo somalia 🇸🇴 waana ugu hambalyeynaya garashada eebbe siiyay (Mansha Allah) waxa kaliya uu ku khaldamay inuu adiga fikir kaa dhagaysto, hore ayaa loo yiri Aqli iduur iyo ilko dameer siman, waxa kale oo la yiri salwoy saar waa taqaan laakiin salkaa waa reer cismaan, Aqoon kasta oo uu yeesho qof iduur ah hankiisu qabiil ma dhaafo, cuqdadda Iyo caddifadda ay qabaan baana Ka wayn wanaag kastaa oo loo sheego, waa wada ciil ku kor aan calyo dhaamin, soomali oo dhan baa islaysay, qolo kasta dhibku waa taabtay, jabhadadihii Siad Barre la dagaallamay midkasta dib u milicso qolodee naxariis loo sameeyay, gumaadka Iduurku Ka cabanayo kii majeerten uu u gaystay baa Ka wayn, SDM fiiri iyo USC, SPM ku dar jabhad kastaa dadkeeda waa la gumaaday maxaa tan iduur gooni Ka dhigay? Waa waalli iyo qar iska xoornimo kkk weligiinba niiqleya sida busaddii uuuuussss.
Waar Keyse. Horta adigu goorma ayaad koreysaa ood fikrad saliim ah oo caadifad iyo cuqdad ka bari soo dhiibaneysaa. Af kuguma yara oo waxaad doontoba waad odhan kartaaye, goormaad ka hadhaysaa inaad labo goorba rag kheyrkaa ah midna dabadiisa ka hadasho midna dabada u dhaqdo? Goorma ayaad noqon doontaa qof isku filan oo fikradiisa si caadi ah sida dadka kale usoo dhiibta? Ma heshay buul yar ood roodhidii qalalneyd eed duurka la wareegi jirtay aad la gasho? Habeenkii si wanaagsan ma u seexataa illeyn waataanu Khaatumo la heshiinay oo ay bacaad orodkii beerku afka iman jirey ka reysteene, mise weli ilnad waad isku qabataa midna iyada kala furan ayaad ku seexataa? Mise weli waxaa tahay dibad wareeg bari ku xidhan tahay oo waxan oo bararaq ah waxa kaa keenayaa waa naftii yareyd oo weli jiq kugu ah? Waxani waa waaliye, ma weyday qof kaa naxa oo xigaalkaa oo cilaajka ku geeya?
sixid: mise weli ilna waad isku qabataa midna iyadood kala heyso ayaad ku seexataa?
Mise weli waxaad tahay dibad wareeg ay baci ku xidhan tahay…
Ahmed iduur dabacayuun: maamul beeleedka iduur ee habruhu isku haystan miya ku cajabiyay? Ma habar awal baa , ma habar jeclaa, ma habar yoonisbaa? Ma habar ajibaa? Ma habar iduurbaa kkkkk kkk kkk meeye habrahaan raggoodii soow kayse ma ahan? Waxa habar meesha joogta soow aniga iima dhaxaan? Malaha waadan ogayne show aabbo i dhihi gaartay kkkk kkkk kkk kkkk kkk kkk kkkk kkkk kkk kkk habro koriyoow maxa hawlo kuu yaallo., weligaaba hiiglee wallee waan lagaa harin dhul ninkiisiba iska leh.
Maxaad tidhi waxaan dibadaha ugu dhaxaa habraha owgood. kkkkkkkkkkk
Beenmaad sheegin. Allaayacisak, habruhu waa kuwa ku baday inaad dibada iyo duurka ku dhaxdo ooy dhaxamuhu cidloda kugu dilaan ood seexato adoo ilna isku haya midna kala haya baqo owgiis. kkkkkkkkkkkkkkkk
Kaysoow waxaan maamul wanaaga hoos kuugu soo daadejinayaa kolkaad duurkan aad meereysaneyso kasoo hoyato. Kolkaas ayaan shaqo qaran kugu dari doonaa oon ku bari doonaa Qiimaha Wadaninimada dhabta ah. Waxaanan kaaga bilaabi doonaa “Samor ku waar, samo ku waar…. ” kkkkkkkkk
Ahmed iduur dabacayuun: horta inta aadan isku qancin been iyo huuhaa iduur waa qabiil somaliyed waxayna leeyihiin maamul beeleed ay isugu dawladeyan kkkk kkkk kkk kkk waxa dhibaato kaa haysataa fahamka meeqamka iduur waana tan u baahan in si dhaba u fahamto, aniga iyo adiga labo beelood oo somaliyed oo gobollada waqoyi galbed somalia 🇸🇴 wada dega aya nahay kkk kkk kk waxan kale ee aad jiidanayso adigay culays kugu tahay laakiin calaf kaa raaci maayo, iskuma diidanin inaad dhaan dabagaalle waddo waana taan hore kuugu sheegay oo caqli iduur iyo ilko dameer siman, hankaagu qabiil ma dhaafo waxa ku deeqo magaca beenta ah iyo is foodhaaqinta aan jirin, markaad hadlayso ama doodayso dadka aad wax u sheego waa somali ku taqaan japan 🇯🇵 iyo china 🇨🇳 wax uma faanaysid waa aniga oo kayse ah oo hargaisa ku nool, ku dhashay , kuna barbaaray, hoos u dhaadhac, xaqiiqdana Ka hadal, iduur kaligood miya somaliand ah? Maxa saddexda xisbi dabacayuun wada siiyay? Hooyadaa caddaladda ay kaa wayday habar yartaa kaa heli mayso, marshafyada iyo kabaradaha jaadka lagu iibiyo adigoo ku hoydo inaad ii faanto waa garasho xumada iduur oo isir baad u leedahay,aragtidaadu lugahaaga ma dhaafto, hankaaguna waa kan ku qanacsan maamul beeleed yaroo iduur isku haysto oo aanba deeqin qabqabla yaashii jabhaddii SNM kkkk kkk kkk adigu xataa kuuli kama heshid ee sxb khiyaali hadalka asaggaaga la aad aniga sheeko marqaan hayla soo aadin ab iyo isir baan isu naqaannaaye , haddaan dhamacda jiifsado adba wax ima dhaantide, musqulaha dhexdoodiyo dharbtaad ku hoyotaa.
Maya Isaaq kelidood Somaliland ma ahan.
Sadexda xisbi hadiyad kumay iman ee ragbaa u tabcay oo geed dheer iyo mid gaaban u koray inay ka midho dhaliyaan.
Nin Samaroon ah iyo mid Dhulbahente ah iyo Mid Warsangeli ahiba haday gelin lahaayeen taag iyo tamar iyo tacab waxay hayeen waxaan hubaa iney soo bixi kari lahaayeen. Taas waa huuhaa aad adigu iskugu sheekeyso ood isku seexiso ood mucaaradnimadaada ku xalaaleyso is leedahay ee taas bal hoos uga yara dhac oo qiro taas.
Saaxiib reer Woqooyi oo dhan ayaa jaadka wada cuna. Magaalo aanan Jaadka lagu gadin iyo Qolo aanan cunin hadaad farta iigu fiiqdo waad iga gar heleysaa. Kabadh Jaad hadaan u hoydo adna ood iyo xas ayuu gabalku kuugu dhacaa adoo qaadka raamsanaya. Afkii aad igula daaqeysay ayaad igu caayeysaa. kkkkkk Kayga intaad arkeyo kaaga ilkuhu ka madheen eed cadayga midhka iliga ah la weydaa miyaanu kuu muuqan. kkkkkk Anigu shakhsiyan jaadka ma cuno, adna sidaas iyo si lamid ah ayaan kuu rajeynayaa. Dadkeena oo dhana waa aafo jaadkuye Alle hakasoo hanuuniyo.
Garash xumo markay tidhaamo, hadaan dhoohanay anigu, adna dhaan dhaan ayaad tahay oo waadigaa duurka meereysanaya. kkkk
Shaqo yarida hadii laga hadlayo dee anigaaba dhac dhac meelahaas shaqooyin uga dul dhaca’e, horta adigu maxaad heysaa? Qadiyada iyo dhaqaalaha kala saar. Dadku waxa ay jahadu ka wareertaa markay Dawlada uun dhankeeda eegaan oo ay afka u dhigtaan. Magaalooyinka waaweyn ee somaliland iyo Somaliland inteeda kaleba dadku wuu wada xarbiyayaa. Insha Allaah shaqo yaraanta waa laga bixi. Dhalinteenuna shaqooyin ku filan wey heli doonaan.
Inagu hadaynu ab iyo isir isku naqaano ood i leedahay iga meereyso, adiga maxaa kaa jaqaaq siiyay oo igaga dul meereysanaysaa. Dee anba waan ku garanayaaye ma’anaa kaa gadanaya buhuu bahaada aad meelahaas la meereysato. At least aniga tayda waxaan ka gadaan dad nool nool iyo wadamo fogfog, adiguse taada geedaha iyo duurjoogta iyo jin iyo jaan aanan la garaneyn ayaad hawada u marisaa. Dee wataase meesha siyaasad ayaa la’isku garbinayaaye, geedaha ama duurjoogtu hakuu garaabaan.
Maanta waxay aheyd maalintii dhirta Somaliland lagu beerayay. Kumanaan geed oo kale ayaan tiradii kuugu daraye ogsoonow in ciidankii aan kuu badiyay. Geedaha waaweyn ee gaamuray waxa la yidhi hore wax uma galaane imika kuwa curdinka ah ka gaadhsii sxb. kkkkk
Ahmed iduur dabacayuun: caqligii aan kugu aqaannay iyo nacasnimadii umbad ku hadasha waxbo kuuma kordhan, khiyaali iyo been baad iskaga jirtaa, waxaad garaacda gidaar cidla ah, waxad Ka kalluumaysata buuraha dushooda, hawada soo leef, garashada ayaa dadka hagta, mar hadduu maanku kaa wareero waxad raadisaa waxadan gaarayn kkk kkk kkk doqon baa tahay fuusto daloosho dhaamiya, way jirtaa inaan somaliland wada leenahay laakiin aaway Aqoontii laysugu gayn lahaa, waxan maqlay iduurku markay yara ladan yihiin way waashaan oo malaa’igta iyo alle ayay caayaan, marka liitana dabaday bannaystaan kkkk kkk kkkk way na sidataa, wuu musallafay, cayntiin ma haysno iyo dawarsi buu billaabaa kkk kkk kkkk maanta xilligii waallida ayaad ku jirtaan, waxan dugayaa markad futada qaawiso , Ab iyo isir buu iduur doqonnimo u leeyahay oo waa taan hore kuugu sheegay ilko dameer iyo aqli iduur siman, hooyada caddaladda ay kaa wayday habar yartaa kaa heli mayso, maamul beeleedka iduurna muqayiliinta SNM unbaa marqaanka ku dhawrta, hargaisa waad aragtay sida looga nool yahay iyo dayaca dhallinta haysta, been iyo huuhaa ayaad ubadkiinnii ku marin habaabiseen kkk kkk kkkk maanta Airporradii iduur baa wada xiran kkk kkk kkkk kkkk kkk kkk kkkk somali waa loo fasaxay kkkk kkk kkk kkkk kkkk kkk kkk taaha yaree xoolo nool baad tahaye.
Miskiin. Maxaad Horta cay miciin u bidaa?
Anoon kugu xanuujin ayaad durba caytamaysaaye! Jaw. Kkkk
Waad kala hadleysaa nin yahow. Caqligii Somaliland lagu dhameyn lahaa dhankaaga ayuu ka fooraraa.
Marna waxaad lasoo taagan tahay Somaliland weynu wada leeyahay ee maxaa aniga lanii qadiyay. Marka dee kaalay oo darinta kusoo fadhiiso lagaama xigee lagugu yidhaahdana fuqaad taageysaa. Adiga oo keliyaata maaha ee in badan kula wadaagta arintaas fool xumada ah.
Inta wax garadka ahi waa kuwa cadkooda goosta. Wixii intaas dhaafsan waa cad quudheed anaguna cadkaas quudha waad nalaga weyntihiin.
Cakuyey doqoni damiir xumaa oo caqli yaraa. Walee inta caqligu kaa fooraro ayaanad waxba arag. Isku dabo meereyso weligaa.
Ahmed iduur Dabacayuun: kkkk kkkk kkk kkk markaad Maqasho iduur waa maamul beeleed reer kaliya dhistay oo runta laguu sheego maxaad u soo urtaa sida jilacii kkk kkk kkk waxa jira murti oranayso maskuba aburbuu dhalaa, wuxuu mooda kasyari, inaan laga maarmi karin,Adigu dabacayuunoow intaas waxaad Ka hadashaa kaalay iyo kaynta ka soo bax kkk waxaadan is waydiin horta ma haystaa wax anfac ah oo qof loogu yeero? Dawladnimad beenta ah ee aad jiidayso horta adigu inaysan ruwaayad ahayn naftaada Ka dhaadhici inta aadan dadkale la doonan kkk kkk kkk kkkk kkkk kkk kkkk kkk kkk kkkk kkkk kkk kkkk kkk kkk kkkk kkkk kkk kkk kkkk kkk kkk kkkk kkkk kkk kkk intaad saamaha jiiddaad tiraahda sanqadha yaan dareemin kkk kkk kkkk kkkk kkk kkkk kkk kkk kkkk kkkk kkk kkkk kkkk kkk kkk qabiil keligood is magacaabay dunida koow hore ugama dhicin haddana doonayo deriskiisa inuu Ku khasbo i aqoonso kkk kkk kkkk kkkk kkk ictiraafka aad aniga iga raadinayso horta cali guray maa kaa aqbalayaa kkkk kkk faysal cali waraabe iyo cirro caqligad ku wadi wayday miyad aniga iigu yeeri kkkk kkk kkk kkkk kkkk kkk kkkk kkk kkk kkkk kkkk kkk kkkk kkk kkk kkkk kkkk kkk kkkk kkk kkk kkkk kkkk kkk kkkk kkk kkk kkkk kkkk kkk sxb haddaad nuxur leedahay iyo dadnimo lafaha ayeeyadaa intaad soo faagto irsaaqad kumaadan raadsateen, marar badan waxan kuu meerinaya hal ku dhig ah hooyadaa hooskaad seexin wayday habar yartaa gayn maysid, idinkibaa jeegaan iyo garxajis ukala safan, idinkibaa is qalanayo oo bi’aadmiga hilbahooda cuna, labo waawan isma qaaddo kkk kkk kkkk kkkk kkk iduur iyo dhulbahante waa labo qabiil oo degaan wadaago maxaan isku biirinnaa haddaan isku imaanno kkkk kkk kkkk ma beentiyo huuhaadaan isla jiibinnaa? Kkk kkkk kkkk kkk kkk kkkk kkkk ma ictiraaf baad igu helaysaa? Jabhaddii SNM baa weli baahan oo kuwaad mujaahidinta ugu yeertaan baa weli qaxwayn kkk kkk kkkk Sadka aad iigu yeerayso maad gudabiirsiga iyo ciisaha siisid kkk kkk kkkk kkkk kkk kkk Caqli keen cawaan yahoow waxbo isma dhaanno, qabiil qabiil uma dawladeeyo sideed iiga dhaadhicisaa dawlad baan ahay kkkk kkk kkk kkkk kkkk kkk kkk kkkk kkk kkk kkkk kkkk kkk kkk caqlixumada aan kugu tilmaamayo waa taa kkk kkkk kkkk kkk kkk kkkk kkkk riwaayaddii aad makastada iyo carruurta u dhigaysay ee aad ku marin habaabisay, dunida uga dawarsanaysay waanu goosannay miyaad aniga ii dhigtaa kkk kkkk kkkk kkk oo sideen u daawada film 🎞 muuse shaani jilayo kkkk kkkk kkk kkk kkkk kkkk war nakala kaxee awr yahay aan fakirin.